I-Morinoya 彩 - Sai - (温泉付貸切Indlu enendawo yokuphola) - I-Airbnb
I-Morinoya 彩 - Sai - (温泉付貸切Indlu enendawo yokuphola)
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguFrancisco
Xa iyi-144 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-12 Okt.
I-Yaya ehlathini - iSai - yindlu enendawo yokuphola yabucala ekwindawo ethe cwaka eTaiko Village, eGunma Prefecture, phakathi kweKaruizawa neKusatsu.Unokonwabela ngokupheleleyo indalo entle unyaka wonke ezantsi kwe-Asama Yamakita.Kukho umthombo wamanzi ashushu wemvelo kwesi sakhiwo. Indawo yokuhlala iqala kwiintsuku eziyi-2 ibe inokuhlala abantu abayi-6.
ᐧ設備等の詳細は英文後にあります ᐧ Morinoya 彩 - Sai - yindlu enohlobo oluthile lwe-onsen ekwindawo yeholide yabucala nekhethekileyo kwiintaba eziphakamileyo zaseKita-Karuizawa. Indlu yethu enendawo yokuphola ifihliwe kwindalo eninzi etshintsha ngokuqaqambileyo kunye nemibala emihle yamaxesha onyaka. Into eyenza le ndlu yahluke ngamanzi ashushu asuka ngqo kwiNtaba yaseAsama ekufutshane. IG@ morinoya_jp
La manzi atyebileyo kule ndlu asikelelwe ziindawo ezininzi eziphilisayo. Unokukhetha ukuphumla uze uphumle kule ndawo inkulu netofotofo eneendawo ezaneleyo zangaphakathi nezangaphandle okanye ubuke iindawo ezininzi onokuya kuzo kunye nezinto ezonwabisayo ezijikeleze le ndawo. Nyuka iindledlana ezintle neendawo eziphawulekayo ezikufutshane, zipholele kwiidolophu ezidumileyo ezifana neManza neKusatsu okanye ukutyibiliza kwikhephu kwiindawo zasekuhlaleni ngexesha lasebusika. I-Kita-Karuizawa inento eninzi onokuyenza kwaye indlu yethu yeyona ndawo ifanelekileyo onokuyibiza ngokuba likhaya. Unokutya kwiivenkile zokutyela ezininzi zasekuhlaleni kunye neevenkile zokutyela ezintle eKaruizawa. Okanye hlala ekhaya uze upheke kwikhitshi lethu elitsha elineendawo ezininzi. Thenga ezona venkile zokutya zikumgangatho ophezulu kwimarike edumileyo yeTsuruya okanye ufumane imveliso engayonakalisiyo indalo kwiimarike zamafama zasekuhlaleni.
Le ndlu inamagumbi okulala e-tatami asentshona naseJapan kwaye inokuhlala abantu abayi-6.
I-wifi ekhawulezayo – i-144 Mbps
Iintsuku eziyi-7 e Tsumagoi
Inombolo yomthetho: M100024279
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tsumagoi